७७ जनालाई नयाँ जीवन दिने साहसी पाइलट एजी शेर्पा को हुन् ? – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ ७७ जनालाई नयाँ जीवन दिने साहसी पाइलट एजी शेर्पा को हुन् ?
दीप संञ्चार असोज ११, २०७८ गते २०:३० मा प्रकाशित
काठमाडौं विमानस्थल आइपुगेपछि पाइलट शेर्पाले चाररपाँच फन्को घुमाए। केही बेर जहाजलाई आकाशमै होल्ड गरे। त्यतिञ्जेल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुरबीन लगाएर हवाई इन्जिनियरहरुले जहाजको चक्का र इन्जिन जाँच गरे। पाइलटले एटिसी टावरसँग कुरा गर्दै जहाज घुमाइरहेका थिए। जाँच गर्दा जहाजमा खासै समस्या देखिएन। त्यसपछि एटिसी टावरले अवतरण गर्ने अनुमती दियो। पाइलट शेर्पाले ल्याण्डिङ गेअर ९डाउन गरे० तल झारे । अब चाही जहाजले थ्री ग्रीन सिग्नल दियो। चक्का आँफै डाउन भयो। त्यसपछि पाइलट शेर्पाले विहान १० बजेर १६ मिनेटमा जहाजलाई अवतरण गराए। जहाजको टायरले भुइँ छोएपछि सबै यात्रुहरु झसंग भए। खुसीले तालि पिटे। झन्डै मृत्युको मुखमा पुगेका उनीहरुले अर्को जीवन पाए झै महसुस गरे। यो अनुभवन पाइलट शेर्पाले २४ वर्षसम्मको पाइलट जीवनमा नभोगेको अनुभव हो।